Sina China CPLA Kitapo vita amin'ny fanavaozana azo antoka plastika - Kitapo vita amin'ny kitapo ary Pabrika | Gianty
Ity kitapo kitapom-batana vita amin'ny CPLA nofonosina tsirairay ity miaraka amin'ny hika, antsy, sotro, ary napkin dia lafin-javatra tsara indrindra amin'ny fandidiana! Ny safidy tsara indrindra amin'ny fitaovana plastika nentim-paharazana vita amin'ny solika, ity kitapo fanaovan-tsakafo ity dia misy fantsom-basy, antsy ary sotro vita amin'ny PLA, plastika miorina amin'ny zavamaniry izay noforonina miaraka amina fitaovana azo havaozina mba hanalefahana ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana. Ny fehin'izy ireo dia nohamafisin'izy ireo dia miondrika sy miondrika mba hanomezana kalitao tokana fampiasana serivisy. Ampirimina ihany koa no apetraka, ahafahan'ny vahiny manala azy ireo ny tanany na manadio fako tsy nahy. Tonga am-pitiavana ho an'ny fanadiovana fatratra, ity kitapom-basy ity dia mpiara-miasa amin'ny sakafo anaty kamiao na sakafo enti-mandeha. Miaraka amin'ny fananganana mivoatra sy kristaly, ny kobanina tsirairay dia mahatanty hafanana hatramin'ny 85 ℃, ka azo ampiasaina tsara amin'ny sakafo mafana sy mangatsiaka.
Ny fonosanay tsy mety amin'ny fanontana. Ny kitapo dia azo asiana marika avy amin'ny tahiry farafahakeliny bitika 200.000 sombiny. Manolotra kitapom-batsy isan-karazany izahay arakaraka ny takian'ny mpanjifa. Azonao atao ny misafidy amin'ireo singa amin'ny tsenanay ary mamaritra ny zavatra irinao tianao. Raha mila fanazavana fanampiny, dia afaka mandefa ny fanontanianao amin'ny info@ecogianty.com.
• Azo zahana malalaka
Item Kitapetaka mamatotra CPLA 7 santimetatra miaraka amin'ny kitapo Bag
Content antsy + fikororohana + lovia kely + napkin
Lokon'ny koba Fotsy, mainty, miloko
Bag ny kitapo taratasy kraft + coating PLA
Weight antsy 4.5g, famafazana 4.5g, sotro 4.5g
Isan'ny carton 500 fonosana
Haben'ny baoritra 64 * 24 * 48cm
Item Kitapetahana vita amin'ny CPLA 6,5 santimetatra miaraka amin'ny kitapo Bag
Weight antsy 4.3g, gargala 4.4g, sotro 5.5g
Haben'ny baoritra 64 * 23 * 50cm
Item Kitapom-bokotra CPLA 6 santimetatra miaraka amin'ny kitapo Bag
Lokon'ny koba White, Black, miloko
Weight antsy 3.5g, gargasy 3.5g, sotro 3.5g
Previous: CPLA + Bamboly akorandriaka vita amin'ny plastika azo alaina azo vita amin'ny plastika misy enina 6 santimetatra
Manaraka: CPLA Kitapom-bidy vita amin'ny plastika tsy misy vita amin'ny plastika - kitapo azo antoka
Kitapobe fanodinana biodegradable
Kitapo fanamboarana entana
Complable Cutlery Set
Cpla kitapo fanaovan-tarehy